Push-ups ungomunye izivivinyo engcono ukuthi yasungulwa yisintu. Ukuze nokuqaliswa kwalo ngeke kudingeke yimuphi amathuluzi. Push-ups ukusiza ukuthuthukisa amandla imisipha eziningana. Ngaphezu kwalokho, manje kukhona engaphezu kwekhulu ezahlukeneyo ezahlukene lo msebenzi onjalo kulabo abathanda zonke izinto zibe zintsha. Ngakho-ke akukho lutho babezizwe umbuzo kanjani ukufunda ukuba ekhama kusuka ekuqaleni.
Buciko umsebenzi eyisisekelo, ungakwazi kalula uhlole intuthuko yakho. Ngaphezu kwalokho, namuhla kukhona omningi ukuqeqeshwa izinhlelo, okuncike kuyo pushups. Kule ndaba, kufanele uqonde kabanzi indlela ukufunda ukuba ekhama kusuka ekuqaleni.
Kalula futhi wonke umsebenzi ayizintandokazi
Kungani kuyinto ithandwa kangaka eliphezulu push-ups? Ziyakwazi ukhululekile, linesizotha nokusiza ukuthuthukisa amaqembu amaningana kwemisipha. lolu hlobo umsebenzi ibizwa ngokuthi base. Iningi umthwalo usemahlombe esifubeni nesiphanga imisipha. Futhi ngesikhathi umsebenzi zisetshenziswa biceps, emuva ABS. Kule ndaba, singasho ukuthi push - elula ngokwanele umzimba ngokusebenzisa esiqeqesha somzimba wakhe. Futhi uma nabo futhi enze squats nge wokudonsa ups, ukusunduza abadala bangaba isisekelo yiluphi uhlelo ekhaya ukusebenzisa. Lezi umzimba angadingi lutho. Kubo, udinga kuphela kancane isikhala oluvundlile.
Ungakhohlwa mayelana inqubo efanele
Uma ufuna ukuqonda ukuthi ukufunda ukuba ekhama kusuka ekuqaleni, udinga ukukhumbula mayelana inqubo efanele. Kuphela uma kwenziwe ngendlela efanele, ngokuvivinya umzimba kungenziwa ngokuphumelelayo akhishwa ngokuphelele yonke imisipha ngaphandle edonsa noma ukulimaza siqu. Technique kubalulekile ukugcina futhi ngoba kubalulekile ukuba sihlale njalo siqaphele intuthuko yakho. Ngamanye amazwi, uma izolo kwenziwa ngendlela efanele mayelana 30 push-ups, futhi namuhla - 60, kodwa ungeyena ngesikhathi esifanayo wawa kuze kube sekupheleni, kodwa nengxenye kuphela, bese ukhuluma ngalokho waqina, awukwazi.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuba baqonde indlela ukufunda ukuba ekhama kusuka emhlabathini, kubalulekile ukwenza umsebenzi ngendlela efanele. Uma kungenjalo - kubalulekile ukunciphisa umthwalo ngenxa ukwesekwa ephakeme kanye ezinikezwa ngaphansi.
Kanjani ukwenza push-ups kwesokudla?
Kukhona izinto ezimbalwa eziyisisekelo ukuthi kuyadingeka ukukhumbula ukuthi ubuchwepheshe isibe lesifanele. Phakathi Uzalo kwisitezi esandleni kumelwe ibekwe komunye nomunye at ibanga kancane kuka ububanzi ehlombe. Naphezu Inkomba amandla kanye nezinga ukuqeqesha okudingekayo ukuze ngenze umsebenzi kusukela isikhundla lapho wena ukhululekile. Ukuze sithathe umbono othile kungenziwa preset, ngaphambi kokuba uqale ekusebenziseni. Kufanele wazi ukuthi zakudala push-ups yilawo posing izandla wenza ehlombe-ububanzi ngaphandle. Kulesi simo kuzokwehlisa umthwalo esifubeni ngokwezinga elikhulu, futhi triceps - kancane. Lapho ekwakhiweni ewumngcingo izandla kakhulu umthwalo etholwe, kunalokho, ezandleni. With ebanzi izikhundla isandla ukugcizelela esiphezulu ubekwe webele elilodwa kuphela. Eminyakeni emibili izinguqulo eyinkimbinkimbi kunazo. Kuphela Kuleso simo, kufanele kuzenze uma zakudala push-ups yingcweti ngempumelelo.
Imilenze kumelwe libekwe ngaphakathi ukwenza wena lihlale kahle ngangokunokwenzeka. Othile ubeka unyawo ngendlela efanayo njengoba isandla - ehlombe-ububanzi ngaphandle. Othile kuletha ndawonye. ukubaluleka Special besesikhundleni sabo khona. Ngakho-ke kubalulekile ukuba senze kanjalo, kwaba ekahle kuwe. Nokho, abantu abaningi umlenze ilungiselelo kuyoba lula ukugcina ukulinganisela kwakho.
akufanele Arch umzimba
Ukuze uqonde ukuthi ukwenza push-ups phansi, kufanele sikhumbule ukuthi umzimba kufanele kudluliselwe nakulabo phambili. Kumele kahle ukuze akha umugqa oqondile. Ngamanye amazwi, musa libe lincane kakhulu noma uphakamise ikhanda lakhe noma ezinqeni. Khumbula, isikhundla uqotho ngaphezulu esithathwayo, ngcono ngeke usabalalise umthwalo phakathi imisipha. Ngenxa yalokho, umsebenzi kuyoba okuphephile.
Esimweni lapho isikhundla lesingiso kunzima ukwamukela futhi ukuba baqonde indlela ukwenza push-ups phansi, abazingeli, khona-ke kufanele azame ukhetho olulandelayo. Uyamukela sokuba 'siyeke amanga "ngendlela yokuthi wena ukhululekile. Ngemva kwalokho izibunu esishubile ne cindezela bese ukuhoxisa esiswini. Lokhu kuzosiza qondanisa yomgogodla kanye likukhiphe isikhundla lesifanele.
Phakathi umsebenzi kufanele sibheke phambili futhi phambili kuphela, hhayi phansi. Njengoba sekushiwo, umzimba kufanele yakha umugqa oqondile. Esikhathini isikhundla sokuqala ngqo isandla. Baqhubeka esisindo. Thina yokutholwa isimo lesifanele? Khona-ke usukulungele push-ups.
Siqala ukwenza umsebenzi
Kanjani ukwenza push-ups ekhaya? Isimo sokuqala senziwa nguwe. Zonke izincomo ziqondwa wahlangana. Emva kwalokhu kufanele wakhama kanye, ukuzama ukwenza kungenzeka ukuqinisekisa imishini. Kwenze ngisho kudingekile esimweni kunzima kakhulu. Qaphela, kuphela uma kungalindeleka inqubo efanele kubangele ukucindezeleka okukhulu. Ngakho ungahlanganyeli ezinikezwa amaningi. Ingabe bonke izinga okusezingeni eliphezulu.
Ukuzama ukugcina indawo yokuqala, baqala kancane wehlise esifubeni bubheke phansi. I izindololwane kufanele kube kusontwe ukuze i-engela 90 degrees. Kuleso simo, uma kukhona ukuqeqeshwa ngokomzimba, kumele kwehliswe kuze kube isikhathi lapho esifubeni othinta phansi. Ngokushesha kudingekile ukubala isikhathi futhi ugxile ngokuqinile phezu kwakhe.
Uma ungazi kanjani ukwenza push-ups ekhaya, khumbula ukuthi kubalulekile ukugcina izindololwane zakho eduze emzimbeni wakho. Uma beqala washintsha, kubalulekile ukuthatha ikhefu iDemo - ukhathele. Ngaleso sikhathi, lapho ufika phansi ezingeni edingekayo, kuyadingeka yima isikhashana. Ngemva kwalokho, nge i isiqhumane ingalo ukunyakaza, ubuyele umzimba isikhundla yayo yasekuqaleni.
Nquma esiphezulu yakho
Ngakho, enye push-up kwenziwa nguwe. Ngemva kwalokho, zama ukwenza ezinikezwa ezimbalwa kakhudlwana. Ukusebenzisa kufanele kube nje kwakukhona nomuzwa wokuthi kunzima ukwenza inqubo efanele. Izandla zithuthumele lokhu, futhi ukuphindaphindwa elilandelayo kungenziwa kuphela ngosizo nethonya imilenze futhi emuva. Lokhu kusho ukuthi isibalo esiphezulu ezinikezwa wenziwa ngawe kulesi sigaba. akufanele benze ukukopela. Ukukhuluma ngokuthi singakanani isikhathi okudingeka uyenze push-ups, kufanele kuphawulwe ukuthi njalo push-ups eziyishumi nanhlanu ngaphezulu nge Jerk - yalokho ampofu kuka, isibonelo, 11 ezinikezwa kwenziwe ngendlela efanele.
umsebenzi ezinjalo eziyisisekelo kungasisiza kubhekwe ophephile. Ikakhulukazi uma leneliseka nge isisindo ayo. Ngamanye amazwi, amasu lesifanele nokubonisa ingqondo ngokuhlanganyela isazela nekutilondvolota mine, ungatholi ekulimaleni. Futhi, hhayi ukuba ezilimele, kubalulekile ngosuku lokuqala, njengoba kushiwo ngenhla, ukubala malini kubalulekile ukwenza push-ups. Isibalo ezinikezwa kufanele landa kancane kancane.
Lapho yomgogodla kuyinto lwalugobile, ungathola isango nezinzwa amathambo, kanye nanoma yimuphi omunye enkingeni. Uma izandla ezibekwe ungakhululekile futhi, ngeke Cishe ukudonsa emalungeni. Ngakho-ke, i-izivivinyo kufanele wasondela ngaphezulu ngendlela efanele. Ngaphezu kwalokho, uma ufuna ukufezekisa imiphumela ezinkulu, udinga wesifunda push-ups. Igama layo lesi-unga ngokuzimela, ukugxila amathuba.
Valery Brumel: Biography, izithombe, imbangela yokufa
Uhlu eziyisisekelo ukudla nge ikhalori omubi
Horoscope. Ukuhambelana: owesifazane Aquarius - indoda Gemini; kanye zesifazane Gemini futhi Aquarius indoda
Indlela yokwenza kusezandleni zakho MicroSIM
Maka yomlando waseSomalia kanye nencazelo
Izimpawu blepharitis nezinhlobo izifo